यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवात ! कमाउनु हुनेछ सोचेभन्दा बढी धन - हिमगाथान्यूज
Home धर्म दर्शन यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवात ! कमाउनु हुनेछ सोचेभन्दा बढी धन
व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशी ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जन्म बार हेरेर नै व्यक्तिको कुण्डली निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मेको बार र राशीले नै ब्यक्तिको भविष्य बारे बताउने गर्छन् । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो कसैले व्यापार व्यवसाय र नोकरी गर्नको लागि पनि आफु जन्मेको बारमा कुन दिन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईलाई सात बार मध्ये कुन दिन के कामको सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
सोमबार स् सोमबारको दिनलाई भगवान शिवको प्रिय दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । सोमबारको दिन गाई, भैसी, घोडा, फुल, घाँस, वृक्ष्य, मोती, चाँदी, आदिको किनबेच गर्नु महिलाहरुको संगत गर्नु निकै राम्रो मानिन्छ ।
शनिबार : शनिबार कुनै पनि नयाँ कार्य सुरु गर्दा शनि देवको ठूलो प्रभाव पर्ने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरएको छ । झुटो बोल्नु, ठगि गर्नु , कपट गर्नु , गृह प्रवेश, स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उद्यघाटन, फलाम , तरवार आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिन्छ ।
Previous articleएका बिहानै दुर्लव सेस नागको दर्शनसँगै आजको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस्, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस्
Next articleरेल आइपुग्यो, कहिले चल्ने टुङ्गो छैन